Ururka Al-shabaab oo labo nin gacmaha ka jaray - BBC Somali
Ururka Al-shabaab oo labo nin gacmaha ka jaray
3 Jannaayo 2017
Image caption Sawir hore
Maxkamad ay leedahay Al-Shabaab ayaa gacmaha midig ka jartay labo nin oo dhallinyaro ah oo ay sheegtay in ay ku heshay dambi ah inay xatooyo ka gaysteen deegaanka Kurtunwaarey ee gobolka Shabeellaha hoose shalay galinkii danbe.
Labada nin ee dhallinyarada ah ayaa magacyadooda lagu sheegay Cabdiqadir Madeey Roobow oo labaatan jir ah iyo Maadeey Eenow Adan oo seddex iyo labaatan jir ah.
Qaadi ka tirsan maxkamadda Al-shabaab ayaa sheegay in raggan ay jabsadeen dukaan ku yaalla tuulo la yiraahdo Dhega-buroow kana qaateen shan milyan oo shilin Soomaali ah iyo kaararka lacagta ee taleefanada.
Labada nin ayaa meel fagaare ah oo ku taalla Kurtunwaarey gacmaha midig lagaga jaray.
Ururkan ayaa deegaanada uu xukumo ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidan oo kale gacmaha ugaga jaray dad uu sheegay in lagu helay xatooyo.